नोबेलले ३२ करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा र पार्किङ बनाउँने (भिडियोसहित) - SangaloKhabar
नोबेलले ३२ करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा र पार्किङ बनाउँने (भिडियोसहित)
बिराटनगर, १७ बैशाख । नोबेल शिक्षण अस्पताल परिषरमा ठुलो लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा र पार्किङ बनाईने भएको छ । अस्पताललाई व्यवस्थित, स्वच्छ एवं मनमोहक वातावरण बनाउँन नोबेलले ३२ करोडको लागतमा बगैंचा र पार्किङ बनाउँन लागेको हो ।
अस्पतालहरु मध्ये नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक रुपमा बनाउँन लागिएको बगैंचा र पार्किङको काम आगामी २०७७ साउनसम्ममा पुरा हुँने अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शमाको भनाई छ । ‘निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भईसकेको छ ।’ डा.शर्माले भने ‘अवको १५ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा बनिसक्छ ।’
यसका लागि नमुना कन्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता भएको छ । टेक्नोक्य्राट कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. र ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि.ले गार्डेन डिजाईन गरेका छन् । नोबेल सञ्चालक डा. शर्माको अवधारणाका आधारमा बरिष्ठ आर्किटेक्ट सुवास अधिकारी नेतृत्वको टिमले बगैंचाको डिजाईन गरेको हो । आगामी साताबाटै काम सुरु गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
अस्पताल भवन अगाडीको करिव ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा बन्ने बगैंचा मनमोहक हुँनेछ । बगैंचामा बच्चाहरुका लागि बाल उद्यान, बिरामी र कुरुवाका लागि क्यान्टिन, मन्दिर, पानीको फोहोरा, बोटबिरुवा र बस्नका लागि आरामदायी कुर्सीहरु राखिनेछ ।
त्यस्तै सामाग्री खरिदका लागि सुपरमार्केट, कपाल/दारी काट्नका लागि सैलुन, फार्मेसी, प्याराफिटसहितको स्टेज लगायत रहनेछ । त्यस्तै व्यवस्थित पार्किङ पनि बनाईने इन्जिनियर ढकेन्द्र बमले बताए ।
व्यवस्थित रुपमा बन्ने बगैंचाको मनमोहक वातावरणका कारण बिरामी र कुरुवाको अस्पताल बसाई मनोरम हुँने विश्वास गरिएको अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्माको भनाई छ । ‘बिरामी र कुरुवाले अस्पताल परिषरमा घुम्दा स्तरीय पार्कको आभास गर्नेछन् ।’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १७, २०७६ समय: ११:४०:०४